नेपाली मूलका सुनील छेत्रीले तोडे मेसीको रेकर्ड ! – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाली मूलका सुनील छेत्रीले तोडे मेसीको रेकर्ड !
काठमाडौं, पुष २५ । क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन् । यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन् ।
३४ वर्षीय सुनील छेत्री भारतीय सुपर लिगमा बेङ्गालुरु फुटबल टोलीका कप्तान हुन् । ‘क्याप्टेन फ्यान्टास्टिक’ उपनामले चिनिने छेत्री भारतीय राष्ट्रिय टोलीबाट सबैभन्दा बढी खेल खेल्ने खेलाडीसमेत हुन्। गत वर्ष एशियाली फुटबल परिषद् (एएफसी) ले छेत्रीलाई ‘एशियन आइकन’ घोषणा गरेको थियो ।
ट्याग्स: sunil chhetri and Messi